Safarka Shiinaha iyo Dalxiiska: Soo noqosho xoog leh
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Shiinaha » Safarka Shiinaha iyo Dalxiiska: Soo noqosho xoog leh
Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Safarka Ganacsiga • Wararka Shiinaha • News • War-Saxaafadeed • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Wararka kala duwan
Dadka Shiinuhu waxay jecel yihiin inay safraan oo ay wax iibsadaan, taasina waxay keenaysaa dabaylo xoog leh oo soo kabashada ah ee soo kabashada warshadaha dalxiiska
Saamayn intee le’eg ayuu cudurka faafa ku yeeshay nolol maalmeedka Shiinaha, gaar ahaan saamaynta ay ku leedahay habdhaqanka safarka?
Shiinaha wuxuu arki doonaa koror ka badan 200% bixitaanka caalamiga ah sanadka 2021, wuxuu gaarayaa qiyaastii 30 milyan oo bixitaan caalami ah.
Heerarka Pre-COVID-19 waxaa lafilayaa inay soo laabtaan sanadka 2023 iyadoo saadaasha taraafikada ay baxeyso si ay u gaarto 88 milyan.
Waxaa jira sabab kasta oo lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan tafaariiqda tafaariiqda safarka Shiinaha ee 2021 rajooyinka kobaca inkasta oo la cusbooneysiiyey xayiraadaha safarka ee lagu soo rogay muddada sanadka cusub. Tani waa sida lagu sheegay cilmi baaristii ugu dambeysay ee suuqa Shiinaha lagu sameeyay m1nd-set.
Hay'adda cilmi baarista ee Switzerland waxay ku muujineysaa daraasad gaar ah oo diiradda saareysa Shiinaha oo ku saabsan taraafikada iyo aragtiyaha dukaamaysiga in, marka la eego kalsoonida macaamiisha, isbeddelada habdhaqanka dukaameysiga iyo rabitaanka macaan ee macaamiisha Shiinaha ee safarka, 2021 ay calaamadeyn doonto bilowga soo noqoshada adag ee koritaanka qaybta tafaariiqda safarka ee Shiinaha. Sida laga soo xigtay cilmi-baarista, Shiinaha waxay arki doontaa koror ka badan 200% gudaha bixitaanka caalamiga sannadka 2021, si loo gaaro qiyaastii 30 milyan oo bixitaan caalami ah. Heerarka Pre-COVID-19 waxaa lafilayaa inay soo laabtaan sanadka 2023, marka la saadaaliyo taraafikada dibada inay gaari doonaan 88 milyan kadib 108% koror 2022 iyo 44% sanadka 2023. Saadaasha kobaca waxay imaaneysaa inkasta oo xayiraadaha safarka lasaaray kahor fasaxa sanadka cusub ee Shiinaha, taas oo u aragtay 28 milyan oo macaamiisha Shiinaha ah in la xayiro ka dib markii uu soo cusboonaaday Cudurka faafa ee COVID-19 waqooyiga gobollada Heilongjiang iyo Hebei.
Cilmibaarista suuqa Shiinaha ayaa sidoo kale faahfaahin ka bixineysa muuqaalka socdaalka Shiinaha, saameynta aafada ku leedahay nolol maalmeedkooda, iyo gaar ahaan saameynta ay ku leeyihiin habdhaqankooda socdaal. Daraasadu waxay sheegtey in talaabooyinka horusocod ee tijaabinta iyo xakameynta, oo ay weheliso imaatinka talaalka, ay muujineyso faafitaankii ugu danbeeyey aan laga fileyn inuu dhaliyo dharbaaxo aad u weyn sida markii ugu horeysay ee faafida uu u qarxay 12 bilood ka hor. Isbedelada habdhaqanka ee socotada ayaa si weyn isku badalay Shiinaha tan iyo markii uu faafay faafida, socdaalayaasha Shiinaha waxay hada si weyn isha ugu hayaan talaabooyinka caafimaadka iyo badbaadada, iyagoo ku celcelinaya nadaafad badan markay safrayaan. Saamaynta tallaalka COVID-19 iyo sida ay u saamayn doonto rabitaanka socotada Shiinaha ah iyo safarkooda qorshaynta ah ayaa sidoo kale lagu lafaguray cilmi-baarista.
In ka badan kala bar (53%) dadka safarka ah ee Shiinaha ee la wareystay waxay sheegeen in dakhliga soo gala qoyskooda uu saameyn xun ku yeeshay cudurka faafa, oo si dhexdhexaad ah uga hooseeya celceliska guud ee adduunka oo ah 55%, iyadoo hoos udhaca u dhexeeya 5% iyo 20% la barbar dhigo ka hor COVID -19 heerarka Shiinaha. Marka laga hadlayo qaadashada safarka caalamiga ah, saddex meelood meel ka mid ah safarleyda Shiinaha waxay yiraahdeen mar kale ma safri doonaan isla markiiba, laakiin 6-da bilood ee ugu horreysa gudahood ka dib marka xayiraadaha laga qaado. Tallaalka COVID-19 wuxuu si lama huraan ah ugu yeelan doonaa saameyn aad u wanaagsan dalka Shiinaha maaddaama 97% safarleyda Shiinaha ah ay diyaar u yihiin inay qaataan tallaalka, kuwaas oo badankood ay sheegeen inay doorbidayaan in la tallaalo sida ugu dhaqsaha badan. Shiineysku waxay u badan tahay inay ka fiirsadaan safarka mar kale haddii ay heleen tallaalka marka loo eego socotada adduunka (39% vs 31%).
Markay ugu dambayntii u safraan heer caalami, cilmi-baaristu waxay muujineysaa ujeedo wanaagsan iyo caqabado. In kasta oo 80% dadka safarka ah ee inta badan booqda Dukaanka Bilaashka ah ee Duty Free ay wali ku sameyn doonaan safarada caalamiga ah ee mustaqbalka, taas oo ka sarreysa celceliska guud ee adduunka oo ah 73%, saddex dalool labo ka mid ah safarleyda Shiinaha ayaa sheegay inay waqti yar ku qaadan doonaan garoonka diyaaradaha marka loo barbar dhigo ka hor . Qiyaastii 27% ayaa sidoo kale waqti yar ku qaadan doona gudaha dukaamada, in ka badan kala badhna waxay isku dayi doonaan inay ka soocaan dadka, taas oo ka badan celceliska socdaalka ee dhammaan gobollada adduunka.
Agaasimaha Cilmibaarista Tafaariiqda Safarka ee m1nd-set, Clara Susset, ayaa faallo ka bixisay: “Isgaarsiinta ayaa fure u ah dib u soo kabashada COVID-19 ee Shiinaha ka dib. Warshaduhu waxay u baahan doonaan inay si wada jir ah u wada shaqeeyaan si ay u soo celiyaan kalsoonida musaafurka oo ay dib ugu soo celiyaan dukaamada Waxay muhiim u noqon doontaa in si fudud loo helo macluumaad cad oo ku saabsan tallaabooyinka caafimaadka iyo amniga ee garoonka diyaaradaha iyo dib-u-dhaca iman kara inta lagu jiro safarka garoonka sababo la xiriira wax-ka-beddelka tallaabooyinka iyo habraacyada. ”
"Safrayaasha Shiinaha waxay muujinayaan dookh cad - iyo u janjeedh ka badan socotada caalamiga ah - tikniyoolajiyadda dhijitaalka ah sida QR Codes, Susset ayaa sii waday," macneheedu waa inaad wax badan ka barto wax soo saarka iyo noocyada dukaamada Duty Free, ka raadi alaabooyin gaar ah oo hubi qiimaha intaadan iibsan. Cilmi baaristu waxay soo bandhigeysaa dhowr nooc oo cusub oo noocaan ah waxayna bixineysaa talooyin ku saabsan sida loo wajaho suuqan muhiimka ah si loo hubiyo in qaybta tafaariiqda safarka ay ka faa'iideysan karto soo kabashada Shiinaha sida ugu macquulsan